Manchester City oo Bangiga u jabinaysa xiddiga bartilmaameedka u ah kooxda Manchester United ee Milan Skriniar – Gool FM
(Manchester) 24 Maarso 2019. Sida wararku ay sheegayaan kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa la soo warinayaa inay isku diyaarinayso inay bangiga u jabiso xiddiga bartilmaameedka u ah Manchester United ee ka tirsan kooxda Inter Milan ee Milan Skriniar.
24-sano jirkaan ayaa muddo dheer la la xiriirinayey inuu u dhaqaaqi doono garoonka Old Trafford, inkastoo ay jiraan warar la isla dhexmarayo oo sheegaya in labada kooxood ay gacmaha ka laabteen arrintan tan iyo markii macallin Jose Mourinho la ceyriyay bishii December.
Man United ma’ahan mid kali ah oo xiisaynaysa saxiixa xiddiga xulka qaranka Slovakia, laakiin warsidaha Calciomercato ayaa warinaya in Man City ay sidoo kale doonayso inay la soo wareegto.
Man City ayaa si aad ah ugu faraxsan inay la kulanto daafacan lagu qiimeeyo 85.5 milyan oo gini oo ay gacanta ku soo dhigto, maadaama ay shaki ka qabaan Vincent Kompany iyo Nicolas Otamendi kuwaasoo labadooduba u muuqda inay ku dhow yihiin dhammaadka xilli ciyaareedkooda garoonka Etihad.
Wakiilka ciyaaryahan Skriniar ayaa todobaadkii la soo dhaafay shaaca ka qaaday inuu hoos u dhigay sanadkii hore dalab ay kooxda Citizens doonaysay inay kula wareegto laacibka uu wakiilka u yahay oo dhan 46 milyan oo gini, laakiin albaabadu ay u furan yihiin xilli ciyaareedkaan.
Kooxaha reer Spain ee Real Madrid iyo Barcelona ayaa sidoo kale la xaqiijiyey inay ku soo biireen raacdada loogu jiro ciyaaryahankii hore ee naadiga Sampdoria.